Tapitra ny fikarohana nataonao ho an'ny trano 5 Marla. Zahao ny lisitra izao. Amin'ireo zava-manintona rehetra an'ity trano ity, ny sarany 27 000 Rs angamba no zava-dehibe indrindra. Raiso ny ampahan'ny fiainana an-tanàn-dehibe misy fananana ao amin'ny G-11. Tonga ho anao irery ny fananana G-11. Ity dia iray amin'ireo safidy azo ampanofaina eto. Ny trano toa izao dia tsy mipoitra matetika. Noho izany, raiso ny teninay ary araraoty indray mandeha amin'ny tolotra iray mandritra ny androm-piainany. Mifandraisa aminay izao hahalalana izay rehetra ilainao mba handraisana fanapahan-kevitra tsara indrindra momba ny fananana!
110,000 PKR / Isam-bolana